स्वास्थ्य Archives - Page 101 of 108 - चौतारी पोष्ट अनलाइन
देशभर डेंगु फैलिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रका मन्त्रीहरुको बैठकमा भाग लिन गए । दुई साताअघि भारत गएका उनले ६ दिन उतै बिताए । अस्पतालहरुमा अहिले डेंगीसँगै स्क्रबटाइफसलगायतका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। तर स्वास्थ्यमन्त्री यादव भने विदेश सयरमा जान लागेका छन् । त्यो पनि दुई साताका लागि । उनले २०७५ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अलिहेसम्म पटकपटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । एक वर्षको अवधिमा उनी २५ पटकभन्दा बढी विदेश सयरमा निस्किएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नागरिक दैनिकमा छ।
शरीरमा संक्रमण फैलिएर ज्यानै जान सक्ने रोग सेप्सिस के हो? कसरी जोगिने? डा हेमराज पनेरु [भिडियो वार्ता]
Posted in भिडियो चौतारी, स्वास्थ्य
कुनै पनि ब्याक्टेरियल, भाइरल, फंगल, प्यारासाइट्सको संक्रमणका कारण शरीरले देखाउने असामान्य प्रतिक्रिया भनेको सेप्सिस हो। यो एउटा यस्तो संक्रमण हो जुन रगत मार्फत् शरिरको बिभिन्न अंगहरुमा फैलिन्छ। रगतमा भएका सेतो रक्तकोषिकाहरु घट्दै जाने हुन्छ। रगतमा हुने सेतो रक्तकोषिकामा रहेको न्युट्रोफिलसमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ र संक्रमणको संभावना कम रहन्छ। तर, शरीरमा न्युट्रोफिलसको मात्रा घट्यो वा कमी भयो भने शरीरमा बिभिन्न संक्रमण हुन्छ। जसले गर्दा सेप्सिस हुन्छ। सानोभन्दा सानो संक्रमण पनि चाँडै फैलिने र सेप्सिस हुने जोखिम रहन्छ। यस अर्थमा कुनैपनि संक्रमण पछि शरिरमा हुने असामान्य प्रतिक्रिया भनेकै सेप्सिस हो। विकसित देशहरुमा धेरैजसो सेप्सिस हुने कारण भनेको ब्याक्टेरियल संक्रमण हुन्छ भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशमा ब्याक्टेरियल बाहेक भाइरल, फंगल, प्यारासाइट्स जस्ता संक्रमणबाट
Childhood malnutrition is solvable
Bill Gates The fact thataquarter of the kids born on the planet don’t get the right food to develop isamind-blowing tragedy. It now stands out as the greatest inequity in the world. But malnutrition isasolvable challenge. I’m Bill Fates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Kids that grow up malnourished, their bodies and their brain never fully develop. Looking at their brain, there’s dramatic stunting in white matter development. And, so their ability to be educated, to be productive, to enjoy their life, it’s permanently eliminated. There are elements of malnutrition that are well understood. If you don’t get enough food overall, if you don’t exclusively breastfeed so that you’re being exposed to disease pathogens when you’re very young, the lack of certain micron
झापामा डेंगु नियन्त्रणबाहिर, पाँच सयभन्दा बढी बिरामी
तीन महिनाअघि देखा परेको डेंगु रोग झापामा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापासहित स्थानीय पालिकालेसमेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा डेंगु रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार झापामा अहिले पनि डेंगुका रोगी पाँच सयभन्दा बढी छन् । उनीहरूको झापाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तै अवस्था रहे झापामा पनि संकट आउन सक्छ । डेंगु नियन्त्रणका लागि गत वर्षसम्मका कार्यक्रम सकिए पनि यस वर्ष कुनै कार्यक्रम नआएको पौडेलको भनाइ छ । स्थानीय तहले डेंगु नियन्त्रणका लागि चासो दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग कुनै पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सहयोग नमागेको पौडेलले बताए । डेंगुका कारण झापामा हालसम्म दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो वर्ष झापामा कस
बाल स्वास्थ्यमा हामी कति पूर्ण?
डा नितेश घिमिरे विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यको परिभाषामा स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले स्वस्थ रहनु भनेर उल्लेख गरेको छ। हाम्रो देशको संविधानमा पनि स्वास्थ्य भनेको जनताको मौलिक हक र राज्यको दायित्व भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। सन्दर्भ-बाल दिवस अनि बाल स्वास्थ्य नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर, नारा लगाएर यो दिवस भव्यसँग मनाइन्छ। यो दिवसमा ठूलाठूला सभा हुन्छन्, अनि मञ्चहरु तातिन्छन्। तर के यी सभाहरुले साँच्चिकै बालबालिकाको अधिकार, स्वतन्त्रता, संरक्षण, विकास, जीवनस्तर सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, जागरूकता बढाउने र आय सिर्जना जस्ता कार्यहरूमा टेवा पुर्यारएको छ त? सबै
मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयअन्तर्गत नियुक्त सल्लाहकारलाई सवारी साधन (गाडी) उपलब्ध गराउन कुनै व्यवस्था छैन। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अवैतनिक सल्लाहकालाई पहुँच र प्रभावका भरमा चालकसहित सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेका छन् । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सचिवालयका लागि नौवटा सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरिएको नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा देखिन्छ । ती सवारीसाधन मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वामित्वमा छन् । नागरिक दैनिकमा छ ।
डेङ्गु नियन्त्रण गर्न घरघरबाटै सरसफाइ अभियान सुरु गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । हरेक मानिसको घरमा डेङ्गुको लार्भा हुर्कन सक्ने वातावरण भएकाले पहिले घरबाट लार्भा नष्ट गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले डेङ्गुबारे सन्त्रास होइन, सचेत हुनुपर्ने र त्यसको सुरुआत घरघरबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले डेङ्गुबारे जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी भएको बताए । अस्पतालमा दैनिक ज्वरो आएर आउने बिरामीमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतमा डेङ्गु पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिँदै उनले तर यो डेङ्गु प्राथमिक चरणको भएकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । द्वितीय चरणमा भएको डेङ्गु भएमा आत्तिनुपर्ने भन्दै उनले अर्को दुई वर्षमा भने द्वितीय चरणको डेङ्गु हुने हुँदा अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्ने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा छ।
डेंगु परीक्षणका लागि कीट प्रयोग नगर्न सरकारले रोक लगाए पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालले यसैको नाममा रकम असुल्दै आएका छन् । अस्पतालले सरकारको निर्देशनविपरीत ‘डेंगु परीक्षण शुल्क’ भन्दै ४ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको पाइएको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकाय भने रमिते बनिरहेका छन् । मन्त्रालयले सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिँदै आएको छ । सरकारले उपचार निःशुल्क भन्दै आए पनि बिरामीले चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको गुनासो छ । डेंगु पहिचानका लागि रगत परीक्षण गर्न अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको बिरामीको गुनासो छ । हालसम्म ५६ जिल्लाका ५ हजार ९७ जनालाई डेंगु संक्रमण भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । राजधानी दैनिकमा छ ।
औषधि ब्यवसायी संघ झापाको अध्यक्षमा गुप्ता निर्वाचित
दमक । नेपाल औषधि ब्यवसायी संघ झापाको अध्यक्षमा दमकका औषधि ब्यवसायी गौतम गुप्ता निर्वाचित भएका छन् । उनले आफना प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र प्रधानलाई हराएका थिए । गुप्ताले २८२ मत ल्याई विजयी भए भने प्रधानले ११८ मत प्राप्त गरेका थिए । दमकमा शुक्रवार सम्पन्न प्रथम जिल्ला अधिबेशनको निर्वाचनबाट गुप्ता जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरि उपाध्यक्षमा २०३ मत ल्याएर प्रदीप खरेल निर्वाचित भए भने उनका प्रतिद्धन्दी गोविन्दप्रसाद अधिकारीले १९७ मत ल्याएका थिए । यस्तै १७० मत ल्याएर सचिवमा ससिम पोखरेल विजयी भए भने उनका प्रतिद्धन्दी अनिल सुवेदीले १३८ र अर्का उम्मेदवार वलराम खतिवडाले ९१ मत प्राप्त गरे । यसेगरि उपकोषाध्यक्षमा युवराज भटटराईले २१७ मत ल्याई निर्वाचित भए भने उनका प्रतिद्धन्दी खेमचन्द्र बस्नेतले १८० मत ल्याएका थिए । सदस्यहरुमा विजयी हुने लक्ष्मी पौडेल ( ३०१ ) ,शुेरस खतिवडा (२४४) र प्रल
के हो पुरुषमा स्तन वृद्धि हुने समस्या गाइनोकोमास्टिया? [भिडियो]
डा गणेश दंगाल पुरुषको स्तनको आकारमा वृद्धि हुँदा के हुन्छ र कस्ता समस्या देखा पर्छन् भन्ने विषयमा स्त्रीरोग विषेशज्ञ डा गणेश दगालसँग बिन्दु शर्माले गरेको कुराकानी : पुरुषको स्तनको आकार बढ्नु समस्या हो या सामान्य हो? यसलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। बच्चादेखि जवान अवस्थामा जाँदै गर्दा वृद्धि विकासको क्रममा हुने प्रक्रिया, जसलाई हामी फिजियोलोजिकल भन्छौँ, जुन सामान्य हो। तर कहिलेकाहीं यो प्याथोलोजिकल अर्थात् रोगको रुपमा पनि पाइन्छ। गाइनोकोमास्टिया हर्मोनको कारणले पुरुषको स्तन वृद्धि हुने एउटा रोग हो। जब पुरुषमा टेस्टटोरन हार्मोनको मात्रा अत्यधिक र स्त्रीमा हुने स्ट्रोजन हार्मोनको मात्रा कम हुन्छ, एक आपसमा दुई वटा हार्मोनको सन्तुलन भइरहँदा टेस्टटोरनको प्रभुत्व बढी हुँदा समस्या हुँदैन। तर केही गरी टेस्टोरनको कमी भएमा या स्ट्रोजन बढेमा स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ। यो प्रक्रिया युवा अवस्थ